Ogaden News Agency (ONA) – Dagaal Dhexmaray Ciidanka Azerbayjan & Dagaal Yahanka Nagorno Karabakh.
Dagaal Dhexmaray Ciidanka Azerbayjan & Dagaal Yahanka Nagorno Karabakh.
Dagaal culus ayaa dhex maray ciidammada waddanka Azerbayjan iyo kuwa gooni u goosadka ee gobolka Nagorno Karabakh. Azerbayjan ayaa sheegtay in ciidammadeeda qalabka sida ay ka jawaabeen weerar loo adeegsaday hubka darandooriga u dhaca iyo bambooyin oo kaga yimid kooxda Karabakh ooy taageerto dowladda Armenia.
Hasayeeshee dowladda Armenia ayaa dhankeeda gaashaanka ku dhufatay eedaynta Azerbayjan , iyadoo sheegtay in ay Jimcihii weerar ballaadhan kusoo qaadday iyadoo adeegsanaysa taangiyo, madaafiic iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca. Madaxweynaha Ruushka, Vladamir Putin, ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xabbadda.
Gobolka Nagorno Karabakh, waxa uu ku dhexyaal dalka Azerbayjan, hasayeeshee baarlamaankiisa ayaa u codeeyay inay ku biiraan Armenia, markii uu burburay Midowgii Soofiyeet ku. Xabbad joojin ayaa lagu heshiiyay sanadkii 1994 si loo soo afjaro dagaalka.